Garmin Oo Soo Bandhigay Jijin Casri Ah Iyo Miisaanka | Wararka IPhone
Garmin waxay soosaaraysaa jijin casri ah iyo cabbir cusub
Dharka la xidhan karo ayaa ah aaladaha hadda ku jira bushimaha qof kasta, in kasta oo aanay had iyo jeer ku jirin jidhkeenna. Dhammaanteen waan ognahay, dhammaantoodna, jijimado xariif ah, laakiin waxaa jira noocyo kale oo qalab ah oo aan si fiican loo aqoon, sida miisaanka. Waa la ogyahay in Garmin wuxuu sameeyaa dhammaan noocyada aaladaha lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa jireed, laakiin hadda waxay dooneysay inay tallaabo hore u sii qaaddo oo weliba soosaariso mashiinka miisaanka caqli badan, kii ugu horreeyay taariikhda.
Qiyaasta cusub kaligeed ma imaaneyso, haddii aysan imaan iyadoo ay la socoto a nooc cusub oo hagaagsan jijimmadaada si loo cabbiro dhaqdhaqaaqeenna jir ahaaneed Vivosmart, kaas oo markan leh kormeeraha garaaca wadnaha ee indhaha oo noo oggolaan doona inaan la soconno garaaca wadnahayaga maalintii oo dhan iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelanaynin is-maamulidda qalabka.
Garmin wuxuu rabay inuu ka boodo tareenka isagoo ku daraya kormeerayaasha garaaca garaaca wadnaha aaladaha kala duwan, si la mid ah sida Sony ama Polar ay horay ugu sameeyeen SmartBand 2 iyo A360 siday u kala horreeyaan. Vivosmart HR waxay cabireysaa garaaca wadnaheena 24 saacadood maalintii iyo 7 maalmood usbuucii iyadoo, sidaas oo ay tahay, Garmin wuxuu noo ballan qaadayaa a ismaamul ka badan 5 maalmood. Intaa waxaa dheer, Vivosmart cusub sidoo kale waxaad heli doontaa ogeysiis, sida Apple Watch iyo smartwatches kaleba u sameeyaan. Dhanka kale, waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno muusikada waxayna nooga digi doontaa marka aan jimicsi sameynaynin waqti cayiman.
Sida miisaanka, Qiyaasta Smart waxay awoodi doontaa inay cabirto culeyskeenna, annaga Tilmaanta Jirka Mass, baruurta iyo boqolkiiba biyaha, waadna ku samayn kartaa ilaa 16 oo qof kala duwan, taas oo ah inay aad uga badan tahay tirada qaraabada qoys kasta.
Vivosmart HR waa la heli karaa ilaa Nofeembar (laga yaabee bartamaha Yurub) midab madow, guduud iyo buluug lehna a qiimaha wuxuu noqon doonaa € 130. Qiyaasta, waxaa la filayaa inay gaarto Yurub bartamihii Nofeembar a qiyaas ahaan € 180.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Garmin waxay soosaaraysaa jijin casri ah iyo cabbir cusub
Ilaa hada miisaanka garmin ee "rasmiga ah" wuxuu ahaa tanita ... Waxaan u maleynayaa inay iyagu iyaga u sameyn doonaan laakiin iyagu waa ay magacaabaan.
€ 40 waxaad la mid tahay isla markaana waxaad ku dalici kartaa gacanta adoo adeegsanaya pc / android.
Ku jawaab i5s
Qiyaasta qiyaasta 180 euro hahaha waa la iibinayaa, habka aan u haysto midka xiaomi ee isla sameeya 25 euro
Snapchat waxaa lagu cusbooneysiiyaa miirayaal cusub iyo 3D Touch
Mareykanka wuxuu dib u cusbooneysiinayaa sharcinimada Jailbreak